Mifananidzo yepamhenderekedzo yegungwa, mvura yakachena yekristani uye zvinyorwa zvenhoroondo inoita kuti Andamans ive sarudzo yakakwana yezororoka, yekunakidzwa kwezororo, neyekufamba kwenguva refu, ichidzungaira mukati mechitsuwa ichi chiri mumhenderekedzo yechitsuwa uye, nokuda kwekuwedzera kunotyisa, kwakadzika kwemahombekombe egungwa. Kubva kudunhu rakasiyana-siyana rePort Blair kusvika kune makungwa machena eNeil neHavelock Islands uye mapapiro emarara e Diglipur, Andamans inopa chimwe chinhu kune vose vanofambira. Iine dzimwe dziva dzakanakisisa muAsia dzakabuda kunze kwefiriji yeparipidhiso yefirimu kana kuti inobuda magazini inovhara. Iko boka reZitsuwa ndeimwe yenzvimbo dziri kure kwazvo pasi. Iyi nzira ichakupai mukana wokutsvaga mune mabhishi ezvo uye uve nezororo rekuzorora.
05 Nights / 06 days | Mutambo Wokushanyira: 030
ZUVA 01: YAKARUKA PORT BLAIR
Paanosvika paPort Blair, ndege yedu ichagamuchira uye inoperekedza kuhotera. Mushure mokunge taona muhotera uye tisingatauri zvishoma, tichazotanga kuona nzvimbo neAnthropological Museum, iyo inoratidza zvigadzirwa, muenzaniso wekugara, unyanzvi uye maoko evanhu vanobva kumarudzi emarudzi eAndaman & Nicobar Islands kubva kuAnthropological Museum, tinopfuurira kuCorbyn's Cove beach. Chiedza neZvinooneka paJail Cellular: Manheru, tinoenda kuChiedza neZviso Rinoonekwa paJenlular Jail apo saga yekusununguka kwekusununguka inounzwa iri vapenyu.
Nhasi, mushure mekudya kwekudya kwemasikati tichaenda kwezuva rose rekutakura kuRoss Island, North Bay (Coral Island) uye Viper Island (Harbor Cruise). Ross Island: Kutanga tinotanga rwendo runofadza (nechikepe) kuRoss Island, iro guta guru rePort Blair munguva yehurumende yeBritain, ikozvino inomirira zvakashata, uye chimiro chavo chiri mumatope. Imwe musamuziyamu inoratidza mifananidzo nemamwe mabhizimisi eBritishers, anoenderana nezviwi izvi. North Bay (Coral Island): Kubva kuRoss Island, tinopfuurira rwendo rwunofadza kuenda kuNorth Bay island (Coral Island) inopa makorori akasiyana-siyana, mavara ehove uye upenyu hwemvura mumvura. Tinogona kuona mavara emakorari nemafuta emvura pasi pemvura achishandisa girazi pasi chikepe uye snorkeling (kusarudza). Harrison Cruise (Viper Island): Masikati, tinopfuurira kuenda kuchiteshi chechikepe, panoramic maonero emanomwe manomwe kubva kugungwa, kureva mahombekombe, zvikepe zvinoputika, nezvimwewo kusanganisira rwendo rwokuenda kuViper Island panzvimbo yekuurawa.
ZUVA 03: PORT BLAIR - HAVELOCK ISLAND
Nhasi, tinotanga rwendo rwedu kuenda kuHavelock Island nechomboti kubva kuPort Blair Harbour. Paunosvika kuHavelock Island, mumiririri wedu achagamuchira uye anokuendesa kuti uende kunzvimbo yacho. Zvisarudzo zvekuzvivaraidza paHavelock Island: Snorkeling rwendo kuenda kuEphantphant Beach: Rs.750.00 Pakati pevanhu (inosanganisira yeBukepe Rokuchengetedza, Mutungamiri & Snorkeling)
ZUVA 04: SVIRA ISLAND- PORT BLAIR
Mushure memangwanani emangwanani, tinopfuurira kuRadhanagar Beach (Bhiza No. 7), iyo Times Magazine yakaratidza nzvimbo yakanakisisa gungwa pakati pemakungwa akakwirira muAsia. Iyi inzvimbo yakanakisisa yekushambira, kushambidza kwegungwa uye kugadzika pamhenderekedzo yezuva-kutsvoda. Mushure memasikati tinodzokera kumashure kuPort Blair (kuburikidza nemugwagwa) uye kugara kweusiku paPort Blair.
ZUVA 05: PORT BLAIR - GUTA KUTSVIRA - KUSHANDISA
Mushure mekushambwa kwemachingwa, tinokuendesa kune imwe nzvimbo yePort Blair guta iyo inosanganisira Cellular Jail (National Memorial), Chatham yakaona guyo (ndiro rekare uye guru muAsia), Forest Museum, Samundrika (Naval Marine Museum), Science Center, Gandhi Park , Marina Park, Andaman Water Sports Complex. Kutenga: Manheru, tinopfuurira kuSagarika (Govt Emporium ye Handcraft) uye mumusika wekutengesa.
ZUVA 06: BUTA KUA ANDAMAN ISLANDS
Drop kuPort Blair / Harbour for Return Rwendo nekunakidza mazororo okuyeuka.